WordPress: ဆက်နွယ်နေသောတင်ပို့ခြင်း Martech Zone
WordPress: Related Post ကိုတွယ်ခြင်း
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 1, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သင် WordPress ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်သင်လိုအပ်သော plugins များထဲမှတစ်ခုသည်၎င်းဖြစ်သင့်သည် Related Post ကို ပလပ်ဂင်။ သို့ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်၏ Daily Reads နှင့်အတူတင်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများပမာဏသည်သက်ဆိုင်ရာစာမူ၏ရလဒ်များကိုတကယ့်ကိုဆိုးဝါးစေကြောင်းသတိပြုမိသည်။
Related Posts ပလပ်ဂင်သည်ဆက်နွယ်သောစာမူများစာရင်းသာပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည် ရှေ့မှာ သင်ဖတ်နေသော post! အကယ်၍ သင်စိတ်ပြောင်းခဲ့လျှင် (ငါမကြာခဏပြုလုပ်သကဲ့သို့) ... မူရင်းအပြီးထုတ်ပြန်ပြီးသော်လည်းဆက်နွယ်နေဆဲဖြစ်သောရေးသားချက်များကိုလည်းသင်မပေးသင့်သနည်း။
ရလာဒ်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်ပလပ်ဂင်သို့အသေးစားပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာ၊ လက်ရှိရေးသားချက်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်ရေးသားချက်များကိုကိုးကားနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်လိုင်း ၉၁ ကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
။ (AND post_date> = '$ now' 'to (UPDATED: 11/15/2011) to: "AND post_date! = '$ now'" ။ "AND post_date <= CURDATE ()"
ဒုတိယအချက်မှာ Del.icio.us မှကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်နေ့စဉ်ဖတ်ရှုမှုများကိုအလိုအလျောက်ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်။ (ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပို့စ်များကိုဘယ်တော့မျှချိုး ဖျက်၍ မရပါ။ ) ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်သည်စာရေးသူအားယခင်ရှာဖွေမှုနောက်အောက်ပါစာကြောင်းကိုထည့်ခြင်းဖြင့်ရှာဖွေခဲ့သောပို့စ်များမှချန်လှပ်ရန်အခြား query parameter တစ်ခုကိုထည့်သွင်းလိုက်သည်။
။ "AND post_author! = 4"
ငါရေးသားသူနံပါတ်ကိုရိုးရိုးလေးအသုံးပြုသူများထံမှရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါကအခြားစားပွဲတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်အရာရာကိုရှုပ်ထွေးစေသည်မဟုတ် - ၎င်းသည်ရလဒ်များကိုပြသသည့်အမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးဝန်တင်ချိန်ကိုနှေးစေသည်။ ဒါကရှေးရှေးစိတ်ပျက်ရတဲ့နှင့်စွန့်ခွာဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
Related Posts များသည်မည်သည့်ဘလော့ဂ်အတွက်မဆိုစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆက်စပ်ရေးသားချက်များသည် Search Engine algorithms ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော link များမှတဆင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုချီးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် Search Engine ရလဒ်များကိုခိုင်မာစေသည်။
ဆက်စပ်ရေးသားချက်များသည်သာမဟုတ်ပါ SEM tool ကိုသော်လည်း။ ဆက်စပ်ရေးသားချက်များသည်အသုံးပြုသူများကိုသင်၏ site တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်မည့် retention tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သူတို့ဆင်းသက်ရာနေရာတွင်သူတို့ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကိုထပ်မံညွန်ကြားချက်များပေးလျှင်၎င်းတို့သည်သူတို့အနီးအနားတွင်ရှိနေနိုင်သည်။
Tags: CP တိုင်းတာပါမြဝတီဆက်စပ်ရေးသားချက်များ
သင်နှင့်အတူ $ 1B အခွန်ငွေဝေမျှခြင်းအစီအစဉ်ကို Google ကြေငြာသည်။
သင့်တွင်ဝဘ် ၂.၀ ပြProbleနာရှိနိုင်လျှင်…
2:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 9, 23
Cool လှည့်ကွက်။ ဆက်စပ်စာမူများသည်ယခင်ဘလော့ဂ်များကိုသာရွေးချယ်သည်ကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ် plug-in ကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ အကြီးအကဲများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်🙂
ဇန်နဝါရီ 3, 2008 မှာ 4: 39 AM
ကောင်းမွန်သော hack - ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားများကိုရိုးရှင်းသော tag များပေါ်တွင်အခြေခံသည့်ရိုးရှင်းသော tag များသုံးသော်လည်း၊ ဆက်စပ်သောပို့စ်များသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောတူသည်။
3:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 05
wow .. ဒီသပ်သပ်ရပ်ရပ်လှည့်ကွက်သည်။ Wasabi နှင့်ပတ်သက်သောရေးသားချက်များအတွက် plug-in မရှိပါကကျွန်ုပ်တွင်ဆက်နွယ်သောစာမူများအတွက် Simple Tags plug-in ရှိပြီး၎င်းသည် postdate <အခြေအနေကိုပင်အသုံးပြုရမည်ဟုခန့်မှန်းနေပါသည်။ အကြံပေးချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ရဲ့ plug-in ကုဒ်ကိုစစ်ဆေးပြီးပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရအောင်ငါပြင်ဆင်လို့ရမလားဆိုတာကြည့်ပါရစေ။
3:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 32
Chandoo, Simple Tags သည် postdate အခြေအနေကိုအသုံးမပြုပါ။ ၎င်းသည်သက်ဆိုင်သည့်စာမူများကိုစာမျက်နှာမြင်ကွင်းတစ်ခုချင်းစီနှင့်တိုက်ရိုက်ဖန်တီးနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည် (သင် cache ကိုမဖွင့်လျှင်) ။ ၎င်းသည်ဆာဗာအတွက်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးအရာမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ပို့စ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုမီသို့မဟုတ်အပြီးတွင်တင်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ အကောင်းဆုံးပွဲများကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
Doug - ခေါင်းစဉ်အနည်းငယ်ပြန်ပြောတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး ...
3:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 02
စိတ်မပူပါနဲ့ Stephen ယောက်ျားတွေငါ့စူးစမ်းလိုစိတ် ယခုငါရိုးရှင်းသော Tags ထွက်စစ်ဆေးသွား!
သူ Mike Schinkel
ဇန်နဝါရီ 5, 2008 မှာ 10: 44 AM
ကောင်းတဲ့ပို့စ်! သို့သော်လည်းငါသည် nits အနည်းငယ်ကောက်ချင်ကြဘူး။
“ မင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်က(မ) အခြားစားပွဲပေါ်မှာပူးပေါင်း" ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့:
"ဒီရလဒ်တွေကိုပြသတဲ့မြန်နှုန်းကိုလျှော့ချပြီး ၀ န်ဆောင်မှုအချိန်နှေးကွေးစေနိုင်တယ်"
၎င်းသည် offbase နှင့်အချိန်မတန်မီပြုပြင်ခြင်း၏ဥပမာကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းကိုတားဆီးပေးသောကြောင့်ပရိသတ်များနှင့်လူများသည်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုအကြံပြုခြင်းကိုကြည့်ခြင်းကရှက်စရာမဟုတ်ပါ။
သင့်တွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအညွှန်းကိန်းများရှိသည်ဆိုပါကသင်၏တုန့်ပြန်မှုအချိန်ကိုအများဆုံးတိုးမြှင့်လိမ့်မည်ဟုယူဆပြီးသင့်အားပြောဆိုသော SQL သည် microseconds။ မည်သူမဆိုသည်စက္ကန့် ၀ က်မျှကွာခြားချက်ကိုပင်သတိပြုမိမည်မဟုတ်ပါ။ ယခုတွင်သင်သည်ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်ကိုအတင်းဖိအားပေးပါကအလွန်ဆိုးဝါးသောလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်စေမည့်အလွန်ကောင်းသော braindead SQL code ကိုရေးနိုင်သည်။ သို့သော်သော့ဒေတာများကိုထပ်မံပေါင်းထည့်ခြင်းသည်ထိုဥပမာ၏နမူနာမဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင်တစ်စုံတစ် ဦး မှထုတ်ပြန်ထားသော plugin ကိုဟက်လုပ်ခြင်းကိုထောက်ခံမည့်အစား၊ သင့်အား၎င်းကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်နှင့်သင်၏တိုးတက်မှုအားအမှန်တကယ်ပလပ်အင်ထဲ၌ထည့်သွင်းရန်သင့်အားထောက်ခံအားပေးလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မြင်ချင်ပါသည်။ သင်ကဲ့သို့အပြောင်းအလဲများကိုအသုံးပြုရန်အပျော်တမ်းသင်္ကေတအချို့ကိုသင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်နောက်ပိုင်းပလပ်အင်ဗားရှင်းအသစ်သို့အဆင့်မြှင့် တင်၍ ၎င်းတို့သည်ပြောင်းလဲမှုများကိုချွတ်ပစ်သော်လည်းမည်သည့်အရာကမှားသွားသည်ကိုမသိနိုင်ပေ။ သင်၏ပြောင်းလဲမှုသည်ညင်သာပျော့ပျောင်းခြင်း၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆုံးရှုံးခြင်းသာဖြစ်သော်လည်းအချို့ဟက်ကာများသည်အဓိကပလပ်အင်ကိုနောင်လာမည့်တည်းဖြတ်ခြင်းကိုဟက်ကာ၏ထိပ်တွင်အသုံးပြုပါက site တစ်ခုသည်ပြိုကွဲစေနိုင်သည်။
JMTCW ။ မဟုတ်ရင်ကောင်းသောအလုပ်တက်ထားပါ။ 🙂
ဇန်နဝါရီ 5, 2008 မှာ 11: 42 AM
တုန့်ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ငါသဘောတူတယ်မသေချာဘူး ငါအချိန်မတန်သေးခင်ချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ တကယ်တော့ငါနောက်ထပ်အပြောင်းအလဲတွေမလိုအပ်ဘဲငါလိုအပ်တဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံးကိုရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုရှာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်စာအုပ်ထဲမှာ developer တိုင်းဟာပစ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
ငါကလည်းကပြောသည် တတျနိုငျသ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ငါ plugin ပိုကောင်းအောင်သောထုံးစံအရလိုအပ်သောမဟုတ်သောကြောင့်, ငါစမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုးစားနေခဲ့ပါဘူး။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရရှိသည်။ ညွှန်ကိန်းများထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းမပြုဘဲစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်တွင်မှန်ကန်သောအဖြေဖြစ်သည်။
ငါသည်သင်တို့၏အခြားမှတ်စုများအပေါ်သင်နှင့်အတူသဘောတူကြဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ပလပ်ဂင်များကိုပြန်လည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းဖြစ်ပြီးအခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသည်ဟုခံစားရသည်။ ငါရေးသားသူဘလော့ဂ်ကိုဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါကိုးကားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သူကဒီစာအုပ်ကိုနောင်ထုတ်ဝေဖို့အတွက်အင်္ဂါရပ်တွေအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်။
PS: တည်းဖြတ်ခြင်းကိုပြုပြင်ပြီးပြီ။ 🙂
5:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 12, 24
@Douglas: ငါသဘောတူတယ်မသေချာဘူး။ ငါအချိန်မတိုင်မီ optimize? ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ အညွှန်းများထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကပရိုဂရမ်းမင်းကိုပရိုဂရမ်းမင်းကိုကြည့်ရှုသူတစ် ဦး နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်တစ်စုံတစ်ရာသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသူနှင့်လက်မှုပညာနှင့်ခြားနားမှုကွဲပြားသည် (ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမှားယွင်းစွာမဆိုလိုပါ၊ ယခင်ဆန့်ကျင်အက္ခရာအခန်းကဏ္။ ။ 🙂
စာရင်းကိုင် (သို့) ရှေ့နေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုပြောတာနဲ့ဆင်တူတယ်။ငါအဲဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး"နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်သည်ကျွမ်းကျင်မှုပညာရှင်များသတိပြုမိသောဆိုးကျိုးများအားလုံးတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ သူတို့၏အားနည်းချက်မှာအလွန်အားစိုက်ထုတ်နေပုံရပြီးရှေ့သို့ထွန်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကကျွန်ုပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးကျွန်ုပ်သည်အကြံဥာဏ်အားလုံးကိုဆန့်ကျင်။ ကြံစည်ခဲ့သည်ကိုဘုရားသခင်သိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အားပြန်ကောင်းလာခဲ့သည်။ 🙂
ဟင့်အင်း၊ ငါပြောနေတာအတိအကျမဟုတ်ဘူး ငါပြောနေတာကတော့သူက open-source ဆိုတော့မင်းရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုမူလစာရေးသူဆီပြန်ထည့်ပေးလို့ရတယ်။ သူတို့ကလက်ခံလိမ့်မယ်၊ ဆက်သွယ်ပြီးကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်သူကကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်နယ်ပယ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများနှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အကောင်အထည်ဖော်သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်သည် ဒရူးပယ်လ် web နည်းပညာအတွက်၊ Drupal အသိုင်းအဝိုင်းသည်အမြဲတမ်းပလပ်ဂင်ရေးသားသူများနှင့်အမြဲဆက်သွယ်နေသည် (Drupal ကသူတို့ကို“ modules” ဟုခေါ်သည်) နှင့်အခြား modules များတိုးတက်စေရန်ကူညီသည်။
5:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 37
ငါ "Post ကိုဖော်ပြမတိုင်မီပို့စ်များကိုသာပြသရန်" ၏ထို option ကိုထည့်သွင်းဖို့ plugin ကိုအတူငါနှင့်ထိတွေ့လိမ့်မည်။ ငါဒုတိယ option သည်ငါ့ဘလော့ဂ်အတွက်အနည်းငယ်ပိုစီးပွားဖြစ်သည်ဟုထင်သော်လည်း၎င်းသည်စာရေးသူကိုစိတ် ၀ င်စားမည်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုမည်။
5:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 10
ဇန်နဝါရီ 5, 2008 မှာ 10: 45 AM
ကြိုတင်မှတ်ချက်၏ format ချခြင်းအပေါ် crud! ငါသည်သင်တို့ကိုမှတ်ချက် preview ကိုခဲ့အလိုရှိ၏ '-)
31:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 43
Doug - ငါဒီမှာတစ်ခုခုပျောက်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ပုံရသည်
သင်တင်ထားသည့်ပို့စ်များပါ ၀ င်ခြင်းကိုတားဆီးသောကြောင့်၎င်းစာမူတစ်ခုအပြီးတွင်ပို့စ်များကိုထည့်သွင်းခြင်းကိုတားဆီးမထားပါ အနာဂတျမှာထုတ်ဝေခဲ့သည်.
31:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 56
ငါ post ကိုအတွက် query ကို update လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
2:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 40 တွင်
@Mike: ကောင်းပြီ၊ ငါထင်တာကပရိုဂရမ်းမင်းကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာနဲ့ပရိုဂရမ်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ကွာခြားချက်လား။
စိတ်ဝင်စားစရာဂုဏ်ထူး။ အရာရာတိုင်းဟာအကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးနဲ့လည်ပတ်ရတာကောင်းပါတယ်။ ကိစ္စတော်တော်များများမှာလက်တွေ့မကျပုံရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပရိုဂရမ်တွင်မည်သည့်အရာတစ်ခုကို run လိုသည်နှင့်၎င်းကိုရရန်အတွက်မည်မျှဒေါ်လာသို့မဟုတ်အချိန်မည်မျှအကြားတွင်ဟန်ချက်ညီရန်ကြိုးစားသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ထိုထိရောက်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုသတိမပြုမိပါကကျွန်ုပ်သည်အပိုအချိန်ဖြုန်းမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အပိုဆောင်းအချိန်သည်ရလဒ်ရကျိုးနပ်သင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ထက်သိသာပါက၎င်းသည်အပိုအချိန်ဖြုန်းမည်မဟုတ်ပါ။ စုံလင်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါ။
3:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 4, 04 တွင်
@Dwayne: ငါကြိုးစားချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီဖို့အတွက်အနည်းဆုံးလုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ အချိန်ပိုသုံးခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ နိမ့်ဆုံးနိမ့်ဆုံးကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေတာက အကယ်၍ သင်ဟာပိုကောင်းတဲ့နည်းစနစ်များကိုမသင်ယူတော့ဘူးဆိုရင်သင်ဟာသင်ကိုရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုမည့်အစားအနာဂတ်မှာအနည်းဆုံးအကြိမ်များစွာထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဆိုပါစို့။ ဟုတ်ကဲ့၊ အလုပ်များစွာသည်အပိုအားထုတ်မှုမလိုအပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လူအများကအတိတ်ကာလကဤကဲ့သို့သောဖြတ်လမ်းမျိုးကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်ကိုကျွန်ုပ်မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၎င်းတို့သည်တန်ဖိုးအနည်းဆုံးနှင့် / သို့မဟုတ်တန်ဖိုးအနည်းဆုံးဖန်တီးသောသူများပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနည်းတာကိုငါဘာလို့သတိပြုမိတာလဲ။ )
@Dwayne: အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ထိုထိရောက်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုသတိမပြုမိလျှင်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ပိုဖြုန်းမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည် အကယ်၍ ထပ်တိုးအချိန်သည်ရလဒ်ရကျိုးနပ်သင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ထက် ပို၍ သိသာပါလိမ့်မည်။ စုံလင်ခြင်းကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါဘူး။
ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့အချက်များလွဲချော်ထင်ပါတယ်။ ပထမ ဦး စွာငါ Doug ငါသတိမပြုမိထိရောက်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးခဲ့သည်, ငါမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ပို။ အရေးကြီးသည်ကောင်းမြတ်ခြင်းအဘို့အအနာဂတ်အနာဂတ်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကို hack အကောင်အထည်ဖော်ရန်သွားလျှင်, အနည်းဆုံးသူတို့ကိုပြောပြခြင်းမရှိဘဲအခြားအသုံးပြုမှုအတွက်ထုတ်ဝေရန်ကြဘူး ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါထိန်းသိမ်းခြင်းပြproblemsနာများမျိုး။
သင်၏မှတ်ချက်၏မကျေနပ်ချက်သည်လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်သန်းခြင်းသည်သင်၏ WordPress အတွက်လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ သင်၏ hacked လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလျော့ချခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူလိုပါကအနာဂတ်တွင်သင့်အတွက်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုတွင်သင်၌ပျောက်နေသောအပ်တစ်လုံးပါသောကောက်ရိုးပုံရှိပြီးယခုအပ်သည်အဘယ်နေရာတွင်ရှိကြောင်းတွက်ရန်လိုအပ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အချိန်ပိုဖြုန်း? Bah, ယေဘုယျအားဖြင့်မလိုအပ်ပါ။ ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ်အပိုအချိန်ဖြုန်း? ဟုတ်တယ်၊ ရေရှည်မှာသူ့အတွက်ပေးဆပ်ရလေ့ရှိတယ်။
ထပြီးသောအခါကိုယ်တိုင်ပင်နာကျင်မှုမဖြစ်စေသောအရာများအတွက်သတိပေးချက်များကိုပယ်ဖျက်ခြင်းသည်လူ့သဘောသဘာဝဖြစ်သည်။ နာကျင်မှုကိုတစ်ချိန်ကခံစားရပြီးထိုနာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရပြီးသောအခြားသူများ၏သတိပေးချက်များကိုသင်နားထောင်ရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။
3:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 03 တွင်
ငါပြောသင့်သောအရာတစ်ခုမှာ; Doug ၏ hack သည်အနည်းဆုံး user option တစ်ခုအနေဖြင့် WordPress နှင့်ထပ်တူထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ဆက်စပ်ရေးသားချက်များကိုယခင်လများကသာကန့်သတ်ခြင်းသည်မိုက်မဲပုံရသည်။
ဒါ့အပြင်ဒေးကိုသူ့ရဲ့ del.icio.us မှာဘယ်လိုတင်ထားလဲဆိုတာကို post တင်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
3:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 09 တွင်
ငါသဘောတူတယ် ... Del.icio.us မှနေ့စဉ်ပို့စ်များကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း ပျော်
3:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 22 တွင်
ဟဲ။ ကောင်းတယ် ငါပထမ ဦး ဆုံးအဘို့အ googled သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
BTW၊ မင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတည်းက Indy ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် ၁၉-၁၉ မှာကျွန်တော်နဲ့နေခဲ့ရတာအကြောင်းသင့်ကိုအီးမေးလ်ပို့ခဲ့တယ်။ မင်းရလား (ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်၏ဤအပိုင်းကိုဖျက်ပစ်ရန်လွတ်လပ်စွာခံစားရသည်။ )
ဧပြီ 6, 2008 မှာ 11: 54 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ပလပ်ဂင်ကိုတင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။